La Taliyihii Arrimaha Dhaqaalaha Ee Xukuumaddii Daahir Rayaale Oo Geeriyooday – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN)La taliyihii Arrimaha Dhaqaallaha Xukuumaddii Daahiir Rayaale, Marxuum Cumar Xuseen Ibraahin, ayaa ku geeriyooday dalka Canada. Kadib markii xaalad caafimaad loo geeyay halkaa dhowaan. Marxuum Cumar Xuseen oo xilal
kala duwan kasoo qabtay xukuumaddihii dawladii Somalia iyo Somaliland, wuxuu ahaa aqoonyahan Baankar ah, isla markaana kasoo qayb qaatay halgankii iyo dib u dhiskii dalka Somaliland. sidoo kale Marxuumku wuxuu ka mid ahaa aqoonyahanka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta Somaliland doorka ku lahaa, isagoo ka mid ahaa khuburada iyo Odayaashii dejiyay manhajka waxbarshada Somaliland ee dugsiyada.
Hase yeeshee Cumar Xuseen oo xukuumaddii Daahir Rayaale ahaa la taliyaha arrimaha dhaqaallaha ee xukuumadda, wuxuu mudooyinkii danbe ku biiray siyaasada, isagoo dhowaan markii Somaliland lagaga dhawaaqay ururada Siyaasada ka mid noqday aas-aasayaashii Urur lagu magcaabo Jamhuuriga, kaas oo ka noqday Guudoomiye, balse uu markii danbe wareejiyay , ka hor intii aanu ku hadhin ururkaasi tartankii qiimaynta ahaa ee lagu sameeyay Ururada siyaasada.
Sida ay shebekadda wararka ee Araweelonews u sheegeen qaar ka mid ah qoyskiisu, waxa maydka marxuumka la filayaa in la keeno dalka maalmaha soo socda.
Bahda shebekada Araweelonews, waxay ka tacsiyadaynaysaa qoyskii, qaraabadii, ehelkii iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxay marxuumku, waxayna Illaahay uga baryayaan inuu marxuumka janadii fardawsa ka waraabiyo iyagana samir iyo iimaan ka siiyo.